Sekuboshwe ilungu lezigelekeqe eWentworth
AMAPHOYISA asebophe osolwa ngokuba ilungu lezigelekeqe eWentworth Isithombe: SITHUNYELWE
AMAPHOYISA ezinhlaka ezahlukene abophe ibhungu (21) elisolwa ngokuba ilungu leqembu lezigelekeqe eWentworth eThekwini lapho abematasa khona nokuvundulula izibhamu ezingekho emthethweni kule ndawo. Lokhu kulandela uphenyo olunzulu lwamaphoyisa abematasa ethungatha lo msolwa izolo.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uColonel Thembeka Mbele uthe amaphoyisa abematasa nokuthunga izibhamu ezingekho emthethweni kulandela ukubulawa kwabantu kule ndawo, abanye basele namanxeba okulimala kanzima ngenxa yezigelekeqe ezihlala zivulela ngenhlamvu.
UColonel Mbele uthe amaphoyisa abelokhu esezithendeni zikamsolwa njengoba bekunemininingwane abesenayo ngaye.
"Ithimba linikele eWentworth kumgwaqo uSilvertree lapho efice khona umsolwa nesibhamu esingekho emthethweni. Isibhamu sitholwe nezinhlamvu eziyisithupha wase eyaboshwa. Uphenyo luveze ukuthi lesi sibhamu santshontshwa emotweni eyayipake ngasenkundleni yezemidlalo iMabhida ngo-Ephreli," kusho uColonel Mbhele.
Ephetha uthe uColonel lesi sibhamu sizoyohlolwa ukuthi ngabe asithinteki yini kwamanye amacala obugebengu esifundazweni nakwezinye izifundazwe. Nomsolwa naye usazolandelwa kuphenyisiswe ukuthi akathinteki yini emacaleni obugebhengu kule ndawo.